Top 9 thuốc tăng vòng 1 an toàn và hiệu quả nhất! | Muasalebang - Muasalebang
Top 9 thuốc tăng vòng 1 an toàn và hiệu quả nhất! | Muasalebang
Đang Đọc: Top 9 thuốc tăng vòng 1 an toàn và hiệu quả nhất! | Muasalebang in Muasalebang
Kufanele ngiyisebenzise? amaphilisi ukwandisa umjikelezo 1 cha, noma ingabe isidakamizwa esisekela ukukhuliswa kwebele siphephile, sisebenzise nemiphumela emibi? Lena imibuzo ebuzwa ngabesifazane abaningi.
Njengowesifazane, wonke umuntu ufuna ukuba namabele ayindilinga futhi akhangayo, kodwa akuwona wonke umuntu onenhlanhla yokuba nalokhu. Enye yezindlela eziphumelela kakhulu ezisetshenziswa abantu abaningi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ukwandisa umjikelezo 1. Uma ukhathazekile, uzibuza ngezinkinga ezingenhla, sicela ubheke isihloko esingezansi!
I-bust egcwele futhi eqinile yilokho bonke abesifazane abakufunayo
1 A/ INGABE KUHLE?
1.1 1. Izindlela zamanje zokwandisa umjikelezo 1
1.2 2. Ingabe kufanele ngisebenzise umuthi ukwandisa umjikelezo 1?
2 B/ UMUZWA WOKUKHETHA IMITHI YOKUTHENGA OKUPHEPHILE KANYE NEMPUMELELO
2.1 1. Imibandela yokukhetha ukuthenga amaphilisi okukhulisa ibele asebenzayo naphephile
2.2 2. Amaphilisi ayi-10 angcono kakhulu naphephe kakhulu okukhulisa ibele
2.2.1 Iphilisi le-Dao Thi livuselela umjikelezo ongu-1
2.2.2 Amaphilisi Okukhulisa Isifuba SePunus
2.2.3 Amaphilisi akhuphuka ngo-1 TRUMISO
2.2.4 Thalgo Bust And Décollet 50ml
2.2.5 I-Nagano 1st round ukwandisa ukhilimu 100ml
2.2.6 I-A’mint 1st round yongeza impushana ye-cereal
2.2.7 Yanhee Thailand Amaphilisi Okukhulisa Ibele
A/ INGABE KUHLE?
1. Izindlela zamanje zokwandisa umjikelezo 1
Khulisa usayizi webele 1 ngenxa yokudla okusebenzayo (izidakamizwa zokukhulisa ibele 1)
Lena indlela ephumelelayo nengabizi esetshenziswa abantu abaningi. Ungathola izithako nezinhlobo zokhilimu namaphilisi okukhulisa amabele ngaphambi kokukhetha. Amakhambi, izakhi kanye nezithako ezihambisana nawo kuzosiza ukuqinisa amabele, ukugcwala, isikhumba esibushelelezi.
Khulisa usayizi webele 1 ngenxa yobuhle
Uma umuthi noma i-serum inomphumela ongasheshi, ukwanda kwezimonyo kusayizi kungabona ngokushesha ushintsho lapho kuqedwa. Ungakhetha usayizi wendandatho engu-1 enkulu noma encane kuye ngokuthanda kwakho.
Indlela yokukhulisa ibele yezimonyo ebizayo
Ukukhuliswa kwebele ngamafutha awo
Leli fomu abesifazane abaningi abasabela kulo ngoba alikwazi ukunciphisa amafutha kuphela esiswini nasemathangeni kodwa futhi likhulise ubukhulu bendawo yesifuba. Kodwa-ke, le ndlela kufanele yenziwe emakhelini ahloniphekile noma izodala izinkinga ezingalindelekile.
2. Ingabe kufanele ngisebenzise umuthi ukwandisa umjikelezo 1?
Amaphilisi okukhulisa amabele ayikhambi eliphephile uma kuqhathaniswa elikhethwa abesifazane abaningi. Izothinta kancane kancane izicubu ezinamafutha futhi ithuthukise kakhulu indawo yesifuba. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa lesi sidakamizwa ngeke kubangele imiphumela efanayo nokuhlinzwa kwepulasitiki okufana namabele aphukile, i-gangrene …
Ikakhulukazi, izindleko aziphezulu njengezindlela zezimonyo noma ukufakelwa kwamafutha e-autologous. Lesi yisizathu esenza abesifazane abaningi bakhethe le nketho.
Njengamanje emakethe kunamaphilisi amaningi futhi ayindilinga angu-1 avela ezinhlobonhlobo ezahlukene. Udinga ukucabangisisa ngaphambi kokukhetha. Ikakhulukazi, uma unesimo sezokwelapha, ungakhohlwa ukubonana nodokotela wakho ngaphambi kokusetshenziswa.
Izidakamizwa/amakhilimu okukhulisa amabele akhethwa ngabesifazane abaningi
B/ UMUZWA WOKUKHETHA IMITHI YOKUTHENGA OKUPHEPHILE KANYE NEMPUMELELO
1. Imibandela yokukhetha ukuthenga amaphilisi okukhulisa ibele asebenzayo naphephile
Sebenzisa imikhiqizo evela kumabhrendi ahloniphekile
Emakethe, kunemikhiqizo eminingi esekela ukukhula kwebele, ethengiswa kakhulu. Lokhu kukwenza udideke ngokwedlulele ngokuthi ungakhetha muphi umkhiqizo. Okokuqala, khetha amabhrendi athembekile athenjwa abantu abaningi, njengephilisi eliwumjikelezo 1 le-DHC…
Uma ungazi okwamanje Imaphi amaphilisi okukhulisa ibele alungile? Bese ungangena ku-inthanethi ukuze uxhumane nomphakathi waku-inthanethi. I-inthanethi iyathuthuka, vele ujoyine iqembu bese uthumela ngokuqinisekile ukuthi uzoba nempendulo.
I-DHC wumkhiqizo wezimonyo ohlonishwayo
Kuyadingeka ukuthi ubuyekeze ngokucophelela izithako zomuthi ngaphambi kokukhetha
Njengoba ngike ngabelana ngenhla, amaphilisi okukhulisa ibele ngokuvamile awukudla okusebenzayo, izithako ezengeza imisoco edingekayo ukuze ukondle amangqamuzana ezicubu zamabele ukuze akhule, akhuthaze izindlala zebele kanye nokujikeleza kwegazi.
Le mithi ivamise ukuqukatha ama-phytoestrogens, ama-phytotrogens, amavithamini E, C, A, amaminerali namanzi ukusiza amangqamuzana esikhumba abe buhle, anempilo, kanye nesakhiwo seseli elingu-1 ukuze aqine futhi aqhakaze ngokwemvelo. Izithako zandisa ukukhiqizwa kwe-collagen, okulungele ukunwebeka kwezicubu kanye nesakhiwo sesifuba, esiza ekuqiniseni amabele.
Ukwengeza, lapho ukhetha amaphilisi okukhulisa usayizi webele, kufanele unikeze okuncamelayo emikhiqizweni ekhishwe emvelweni njengamahlumela e-soya, amantongomane, i-oatmeal, i-ylang-ylang, i-geranium, ne-chamomile. Zinobuthi obuphansi, imiphumela elinganiselwe emzimbeni womsebenzisi. Umuthi we-herbal uzoba nomthelela ojulile, umphumela awusheshi kodwa unikeza imiphumela yesikhathi eside futhi uphephe kakhulu.
Thenga ekhelini elihle:
Ngoba ukusebenzisa izidakamizwa kuthinta ngqo impilo yabasebenzisi, ngakho uthenga kuphela izimpahla ezindaweni ezihlonishwayo namakheli ukuze ugweme ukuhlangana nezimpahla zomgunyathi nezisezingeni eliphansi.
2. Amaphilisi ayi-10 angcono kakhulu naphephe kakhulu okukhulisa ibele
Iphilisi le-Dao Thi livuselela umjikelezo ongu-1
Lolu uhlobo lwezemithi lwaseVietnam, izithako zivela emvelweni ngokuphelele, ngakho-ke kuphephe kakhulu kubasebenzisi.
– Isithako: Amahlumela e-soya, i-ginseng, i-vitamin E, i-aloe vera, i-collagen namanye amakhambi emvelo.
– Imizwa lapho usebenzisa: amaphilisi anda round 1 ukuqeqeshwa ukuhlolwa usizo bAmabele aqinile, amakhulu, ashisayo futhi Izingono ezikhanyayo, ukufiphala okuncane, ukuwohloka kancane ngemva kwezinyanga ezi-2 zokusetshenziswa.
– Ukusebenzisa: Thatha izikhathi ezi-2 ngosuku, thatha amaphilisi ama-2 isikhathi ngasinye. Kufanele kuthathwe imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla
Amaphilisi okukhulisa ibele e-BBB Orihiro
Amaphilisi okukhulisa ibele e-BBB Orihiro ayingxenye yochungechunge lwemikhiqizo enikela kumkhiqizo we-Orihiro, e-Japan, ezwakala ezimakethe zasekhaya nezangaphandle. Iphilisi lokukhulisa ibele le-BBB Orihiro liwukucwebezela kwezithako zemvelo ngobuchwepheshe besimanjemanje nobuthuthuke kakhulu, okunikela ekudaleni umkhiqizo wekhwalithi ephezulu “oguqula” isifuba esiyisicaba sigcwale, esigcwele ukukhanga. .
– Izithako: Izithako zamaphilisi okukhulisa ibele e-BBB Orihiro zingamakhambi emvelo, awanangozi ngokuphelele empilweni yabasebenzisi njenge-maca powder, i-seagrass calcium, i-seaweed, i-silicon dioxide, imbewu ye-Pueraria … Akusizi nje kuphela ukuthi umzuliswano wokuqala uqine, ukhulise ibele , ukwanda ngosayizi, kodwa futhi kwenza isikhumba sibe bushelelezi, sibe bomvu.
– Zizwe lapho usebenzisa: Umkhiqizo udonswa ngokushesha, akukho miphumela emibi lapho usetshenziswa. Umzimba ujwayelekile ngokuphelele, emva kwenyanga engu-1, indawo yesifuba iqala ukukhula futhi kunezinguquko ezisobala.
– Isetshenziswa kanjani: Thatha amaphilisi ayi-10 ngosuku futhi ungawahlukanisa ngokusetshenziswa okuningana. Khumbula ukuphuza amanzi amaningi ukuze uthole umsoco ongcono kakhulu.
Amaphilisi Okukhulisa Isifuba SePunus
I-Punus iwumkhiqizo wokukhulisa amabele ocwaningwe e-Japan ukuze kuthuthukiswe usayizi webele nobuhle kwabesifazane. Umthombo wezinto ezingavuthiwe ungeniswa kwamanye amazwe futhi ungokwemvelo ngokuphelele, uhlolwe futhi unikezwe ilayisense nguMnyango Wezempilo.
Izithako: I-ginseng ekhishwe, igciwane lesoya, amavithamini E, C, I-Glutathione…
Lezi zithako zihlangana ukuze zisize indawo yebele ukuthi iqine, ibushelelezi, ingagcini ngokuba bomvu ngokuvuselela ukukhiqizwa kwe-collagen ukuvimbela ukuguga, kodwa futhi ikhuthaze ukukhula kwezicubu ezinamafutha, ikhulise ubukhulu besifuba.
– Imizwa lapho usebenzisa:
Umjikelezo ongu-1, uqinile.
Isikhumba simhlophe, sibomvu.
Ukuya esikhathini kujwayelekile, kukhulula ukoma.
Ukunciphisa ukushisa okushisa, ukukhumbula nokukhohlwa, noma ukucasuka.
– Ukusebenzisa: Thatha izikhathi ezi-2 ngosuku, amaphilisi ama-2 isikhathi ngasinye. Phuza cishe imizuzu engama-30 ngemuva kokudla.
Amaphilisi akhuphuka ngo-1 TRUMISO
I-TRUMISO ingumkhiqizo osebenzisa ngempumelelo ubuchwepheshe be-Phytosome ukukhipha ama-Isoflavone emahlumela kabhontshisi wesoya – isithako esisagolide esisebenzayo samahomoni abesifazane.
I-Upsize Bust Care Cream 50ml
Umkhiqizo uvela kumkhiqizo odumile eRussia, okuyi-Hendel’s Garden. Le yinkampani yezimonyo yemvelo engathinti impilo yabasebenzisi.
I-Deoxymiroestrol: Uma kuqhathaniswa namahlumela kabhontshisi wesoya, le nhlanganisela inomphumela onamandla ophindwe ka-100 ekwandiseni usayizi we-bust.
I-Pueraria Mirifica impande ekhishwe: Ithambisa isikhumba ngokuphumelelayo futhi ikhulise amabele.
I-Rose oil essence: Ivimbela ukuguga, i-stretch marks, ikhuphula ukunwebeka, isiza isikhumba sibe bushelelezi, siqine, sibe busha.
– Imizwa lapho usebenzisa: Ngemva kwezinyanga ezi-3 zokusetshenziswa ukhilimu okhulayo ojikelezayo 1, ngibona ngokuyisisekelo, ubukhulu be-bust yokuqala bunganyuswa kusuka kumasayizi angu-1-2. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uzosiza isikhumba sesifuba sithambile, siqinile futhi sinwebeka, siqede ama-stretch marks.
– Indlela yokusebenzisa: Ngemva kokuhlanza isifuba sokuqala, gcoba ukhilimu ebeleni ngalinye kuze kube ukhilimu womile, bese uqhubeka nokubhucunga ngokulinganayo imizuzu eyi-10 kuya kwengu-15.
Thalgo Bust And Décollet 50ml
I-Thalgo Bust And Decollete iyiphilisi lokuthuthukisa ibele lomkhiqizo wezimonyo waseFrance, elidume ngemikhiqizo yalo yokunakekela isikhumba evela ezitshalweni zasolwandle nolwelwe. I-Thalgo Bust And Décollete Breast Enlargement Cream ithenjwa abesifazane abaningi.
Izithako eziyinhloko: Izimpande ze-Trimium, imbewu ye-rye, i-carrageenan, i-oatmeal.
Ezinye izithako: glycerin, alcohol denat, xanthan gum, chondrus crispus (carrageenan) extract, phenoxyethanol, limonene, linalool, Aqua (amanzi)…
Lezi zithako zihlanganisa ukudala izakhi ezingagcini nje ukukhuthaza ukukhula kwezicubu ezinamafutha endaweni yesifuba, okusiza ukukhulisa nokuqinisa amabele, kodwa futhi kube nomthelela wokuthambisa isikhumba, i-rosy, intsha.
– Zizwe lapho usebenzisa: Umkhiqizo unephunga elibonakalayo lama-oats, elula futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
– Isetshenziswa kanjani: Udinga nje ukuthatha inani elanele ukhilimu, massage njalo endaweni esifubeni, ngokuqhubekayo sebenzisa kusukela 2 kuya 3 amasonto uzobona izinguquko ezithile.
I-Nagano 1st round ukwandisa ukhilimu 100ml
I-Nagano – uhlobo oluphezulu lwezimonyo zemvelo ezivela eNaganoshop yaseJapan. Imigqa yomkhiqizo okuhlanganisa ukhilimu wokuthuthukisa ibele ngaphambi kokuba ingeniswe eVietnam ayiphumeleli nje kuphela ekuhlolweni okuqinile kwezindinganiso zaseJapan kodwa futhi kufanele idlule ohlelweni lokufunda, ukucwaninga, ukuhlola ukubona ukuthi ukusabela ezinhlotsheni eziningi zesikhumba yini. izinkathi zonyaka.
Imikhiqizo ekhishwe emvelweni iphephile, imnene futhi ilungile, ngisho nesikhumba esibucayi, ayizange ibhale noma yiziphi izimpawu zokucasuka.
I-A’mint 1st round yongeza impushana ye-cereal
Imikhiqizo ye-A’mint house itholakala ku-100% kubhontshisi wemvelo wemvelo kanye nembewuIngxube yamahlumela + imbewu, amahlumela kabhontshisi wesoya wezokwelapha okungewona we-GMO asebenza ngempumelelo futhi aphephe ngokuphelele ukusetshenziswa isikhathi eside + ama-walnuts asiza ukugcina izicubu zamabele ukuthi zingabuyi lapho ziyekwa ukusebenzisa.
Yanhee Thailand Amaphilisi Okukhulisa Ibele
Iphilisi lokukhulisa ibele le-Yanhee liwumugqa womkhiqizo osuka eThailand, wacwaningwa futhi wakhiqizwa isibhedlela saseYanhee. Amaphilisi okukhulisa ibele e-Yanhee (igama eligcwele i-Yanhee Compound Pueraria Marifica Capsule Bio) ahlasele imakethe yasekhaya yase-Thai isikhathi eside ngaphambi kokudala imfiva kuzo zonke izinkundla zezimonyo zase-Vietnam.
Amaphilisi okukhulisa amabele azokusiza ukuthi uthuthukise isimo samabele axegayo, i-loofah noma “isikrini esiyisicaba” ngokwemvelo, ngobumnene ngaphandle kokusebenzisa izinto zokusika. Ngethemba ukuthi uzokuthola ngokushesha umkhiqizo ofanele!
Xem Thêm Top 5 sản phẩm trị mụn cấp tốc hiệu quả nhất 2020 nên mua ngay | Muasalebang
Top 8 Phấn nước (Cushion) nào tốt được ưa chuộng hiên nay | Muasalebang
[Tư vấn] Laptop Lenovo có tốt không điều bạn nên biết | Muasalebang